Vabereki Chengetai Vana Venyu Sezvinoita Mufudzi | Yokudzidza
“Unofanira kunyatsoziva kuti makwai ako akadini.”—ZVIR. 27:23.
Vabereki vanofanira kuita sei kuti vachengete vana vavo sezvinoita mufudzi?
Vabereki vangaitei kuti vape vana vavo zvokudya zvokunamata?
Vechiduku vakawanda vakabatsirwa sei nokunamata kwemhuri?
1, 2. (a) Basa raiitwa nevafudzi vechiIsraeri raisanganisirei? (b) Vabereki vakafanana papi nevafudzi?
BASA raiitwa nevafudzi muIsraeri rainge rakaoma. Vaipiswa nezuva, vaitonhorwa nechando uye vaifanira kudzivirira makwai avo kuti asadyiwa nezvikara uye asabiwa nembavha. Vafudzi vaigara vachiongorora makwai avo uye vairapa anorwara uye ainge akuvara. Vainyanya kuchengetedza makwai maduku nokuti aiva asina simba semakwai makuru.—Gen. 33:13.
2 Vabereki vechiKristu vanofanirawo kutevedzera mufudzi pamabatiro avanoita vana vavo. Vane basa rokurera vana vavo “mukuranga nokutungamirira pfungwa kunoitwa naJehovha.” (VaEf. 6:4) Basa iri riri nyore here? Kwete! Vana vanogara vari mungozi yokutsauswa nenhema dzaSatani uyewo vanoramba vachirwisana nechivi chatakaberekwa nacho. (2 Tim. 2:22; 1 Joh. 2:16) Vabereki, mungabatsira sei vana venyu? Ngatikurukurei zvinhu zvitatu zvamungaita kuti muchengete vana venyu sezvinoitwa nevafudzi pavanochengeta makwai. Munofanira kuvaziva, kuvapa zvokudya uye kuvatungamirira.
ZIVAI VANA VENYU
3. Vabereki vangaita sei kuti ‘vanyatsoziva’ vana vavo?
3 Mufudzi akanaka anonyatsoongorora gwai rimwe nerimwe kuti aone kana risiri kurwara. Munogona kuitawo saizvozvo kuvana venyu. Bhaibheri rinoti: “Unofanira kunyatsoziva kuti makwai ako akadini.” (Zvir. 27:23) Kuti munyatsoziva vana venyu, munofanira kuongorora zvavanoita, mafungiro avo uye manzwiro avo. Mungazviita sei? Imwe nzira yakanaka chaizvo ndeyokugara muchikurukura navo.
4, 5. (a) Vabereki vangaitei kuti vana vavo vasununguke kutaura zvavanofunga? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.) (b) Zvii zvamakaita kuti vana venyu vanzwe vakasununguka kutaura nemi?
4 Vamwe vabereki vakaona kuti kukurukura nevana vavo kunonyanya kuoma kana vava pamazera okuyaruka nokuti pazera iroro, vanowanzonyara kutaura mafungiro avo nemanzwiro avo. Kana zvirizvo zviri kuitwa nevana venyu, mungaitei? Pane kuita zvokutogara pasi muchimanikidza mwana wenyu kuti ataure, edzai kukurukura naye pamunenge muchiitawo zvimwe zvinhu. (Dheut. 6:6, 7) Pamwe pacho mungatofanira kutsvaka mikana yokuti muite zvinhu pamwe chete. Munogona kumbofamba mose muchitwasanudza zvenyu makumbo, kumbotenderera nemotokari, kutamba kana kuita rimwe basa repamba. Panguva dzakadaro, mwana wenyu anogona kunzwa akasununguka kutaura.
5 Ko kana akasataura? Munogona kuedza zvimwe. Somuenzaniso, pane kubvunza mwanasikana wenyu kuti zvii zvaswera zvichiitika kwaari, munogona kumuudza zvaswera zvichiitika kwamuri. Anogona kupedzisira ava kutaurawo zvaitika kwaari. Kana muchidawo kuona kuti mwana wenyu anofunga sei pane imwe nyaya, munogona kumubvunza zvisiri pachena. Mungamubvunza kuti shamwari yake inoona sei nyaya yacho. Madaro momubvunza kuti angaibatsira sei.
6. Vabereki mungaitei kuti vana venyu vaone kuti munoda kuva nenguva navo uye makasununguka?
6 Kana muchida kuti vana venyu vataure nemi, vanofanirawo kuona kuti munoda kuva nenguva navo uye kuti makasununguka. Kana vabereki vachigara vachiita sokuti vakabatikana chaizvo zvokutadza kukurukura nevana vavo, vana vanogona kupedzisira vasingachatauri zvinovanetsa. Asi mungaratidza sei kuti makasununguka? Hamufaniri kugumira pakungoudza vana venyu kuti, “Munogona kutaura neni chero nguva.” Vana venyu vanoda kutanga vaona kuti hamuzooni matambudziko avo seasina musoro uye kuti hamuzovagumbukiri. Vabereki vakawanda vanoita zvakanaka panyaya iyi. Kayla ane makore 19 anoti: “Hapana nyaya yandisingagoni kutaura nababa vangu. Vanondisiya ndichinyatsopedza zvandinenge ndichida kutaura uye havanditsvakiri mhosva; vanonyatsoteerera. Vanobva vandipa mazano anobatsira chaizvo.”
7. (a) Vabereki vanofanira kukurukura sei nevana vavo nyaya dzerudo? (b) Vabereki vangagumbura sei vana vavo?
7 Kunyange kana muchitaura nezvenyaya dzakadai sedzokudanana, ngwarirai kuti musanyanye kutaura zvakaipa zvinogona kuitika muchisiya zvakanaka. Somuenzaniso, unonzwa sei kana ukapinda muresitorendi wobva wapiwa pepa riri kungorondedzera kukuvadza kana kurwarisa kunogona kuita zvokudya zvemo? Zvimwe waizobva paresitorendi yacho wotsvaka imwe. Ndizvo zvinogona kuitwawo nevana venyu kana vakakubvunzai mazano asi mongovaudza zvakaipa zvinogona kuitika. (Verenga VaKorose 3:21.) Asi munofanira kuva nemaonero ari pakati nepakati. Imwe hanzvadzi yechiduku inonzi Emily yakati: “Vabereki vangu pavanotaura neni nyaya dzevakomana, havamboiti sokuti pane chakaipa. Vanonyanya kutaura nezvekufadza kunoita nguva yokuzivana nemumwe munhu uye yaunodanana naye nechinangwa chokuroorana. Izvi zvakaita kuti ndisununguke kutaura navo nezvenyaya dzakadaro. Ndinoda kuti vazive nezvemunhu chero upi zvake wandichadanana naye pane kuvavanzira.”
8, 9. (a) Zvakanakirei kurega mwana achitaura kusvika apedza? (b) Zvii zvakanaka zvakaitika pamakanyatsoteerera mwana wenyu achitaura?
8 Zvakataurwa naKayla zvinoratidza kuti munogona kuratidza vana venyu kuti makasununguka kana mukanyatsovapa nguva yokuti vataure zviri pamwoyo. (Verenga Jakobho 1:19.) Vamwe amai vanorera mwana vari voga vanonzi Katia vakati: “Kare ndaisava nemwoyo murefu kumwanasikana wangu. Ndaisamupa mukana wokupedza nyaya yaanenge achitaura. Pamwe pacho ndaingonzwa kuneta zvokusada kuteerera uye pamwe ndaisada zvokunetswa. Pandakachinja maitiro angu, mwanasikana wangu akachinjawo. Iye zvino atonyanya kusununguka kundiudza manzwiro ake.”
Vateererei kuti muvazive (Ona ndima 3-9)
9 Nyaya yakafanana naiyoyo yakaitika kuna Ronald nemwanasikana wake ari kuyaruka. Ronald anoti: “Mwanasikana wangu paakandiudza kuti aidanana nemumwe mukomana kuchikoro, ndakagumbuka chaizvo. Asi pandakafungisisa kuti Jehovha anoitira vashumiri vake mwoyo murefu uye anovanzwisisa, ndakaona kuti zvaiva nani kuti ndipe mwanasikana wangu mukana wokutaura manzwiro ake ndisati ndamutsiura. Pandakarega mwanasikana wangu achitaura zvaaifunga, ndakatanga kunyatsomunzwisisa! Paakapedza kutaura, zvakanga zvava nyore kutaura naye zvakanaka. Zvakandishamisa chaizvo kuti akateerera zvandaimutaurira. Akataura kuti aida chaizvo kuchinja maitiro ake.” Kugara muchitaura nevana venyu kunoita kuti munyatsoziva zvavanofunga uye manzwiro avo. Izvozvo zvichaita kuti muvabatsire kuita zvisarudzo zvakanaka muupenyu. *
IPAI VANA VENYU ZVOKUDYA
10, 11. Mungabatsira sei vana venyu kuti vasatsauswa?
10 Mufudzi akanaka anoziva kuti rimwe gwai rinogona kurasika richibva pane mamwe. Rinogona kutorwa mwoyo neuswa huri nechekure uye rinoramba richienda kure zvishoma nezvishoma kusvikira rarasika. Izvozvo zvinogona kuitikawo kumwana wenyu. Anogona kutanga kutsauka zvishoma nezvishoma nemhaka yeshamwari dzisina kunaka kana kuti nevaraidzo isina kunaka. (Zvir. 13:20) Mungaitei kuti izvozvo zvisaitika?
11 Pamunenge muchidzidzisa vana venyu, kurumidzai kuvabatsira kana mukaona kuti pane pavanofanira kugadzirisa. Vabatsirei kuti vasimbise unhu hwechiKristu hwavanahwo. (2 Pet. 1:5-8) Nguva yekunamata kwemhuri ndiyo yakanyanya kunaka kuti muvabatsire. Ushumiri hwoUmambo hwaOctober 2008 hwakataura nezvekunamata kwemhuri huchiti: “Misoro yemhuri iri kukurudzirwa kuti iite basa rayo pamberi paJehovha rokuva nechokwadi chokutevedzera purogiramu inobatsira yokudzidza Bhaibheri semhuri nguva dzose.” Muri kushandisa here mukana uyu wakanaka kuti mudzidzise vana venyu? Zivai kuti vana venyu vanofara chaizvo pamunorega kuita zvimwe zvinhu zvinokosha kuti muvabatsire kuva noukama hwakanaka naJehovha.—Mat. 5:3; VaF. 1:10.
Vapei zvokudya (Ona ndima 10-12)
12. (a) Vechiduku vari kubatsirwa sei nekugara vachiita kunamata kwemhuri? (Onawo bhokisi rakanzi “ Vakabatsirwa Nokunamata Kwemhuri.”) (b) Wakabatsirwa sei nepurogiramu yekunamata kwemhuri?
12 Mumwe musikana wechiduku anonzi Carissa akataura nezvokubatsirwa kwakaitwa mhuri yavo neKunamata Kwemhuri achiti: “Chinondifadza ndechokuti tose tinokwanisa kugara pasi tichikurukura. Izvi zvinoita kuti tinyatsowirirana uye tive nezvinhu zvakanaka zvatinozogara tichiyeuka. Baba vangu vanova nechokwadi chokuti tinogara tichiita Kunamata Kwemhuri. Zvinondikurudzira chaizvo kuona kuti vanonyatsokoshesa purogiramu iyi, uye izvozvo zvinoita kuti ndiikoshesewo. Zvinoitawo kuti ndiwedzere kuvaremekedza sababa vangu uye semunhu akanzi atungamirire pakunamata.” Imwe hanzvadzi yechiduku inonzi Brittney yakati: “Kunamata Kwemhuri kuri kuita kuti ndiwedzere kuva pedyo nevabereki vangu. Kunoita kuti ndione kuti vanoda kunzwa nezvematambudziko angu uye kuti vanondida zvechokwadi. Kunotibatsira kuti tive mhuri yakasimba uye yakabatana.” Zviri pachena kuti nzira inonyanya kukosha yokuratidza kuti muri vafudzi vakanaka, ndeyokupa vana venyu zvokudya zvokunamata pakunamata kwemhuri. *
TUNGAMIRIRAI VANA VENYU
13. Mwana angakurudzirwa sei kuti ashumire Jehovha?
13 Mufudzi akanaka anoshandisa mudonzvo kuti atungamirire uye adzivirire makwai ake. Chimwe chinangwa chake ndechekutungamirira makwai ‘kumafuro akanaka.’ (Ezek. 34:13, 14) Semubereki, izvi handizvo zvaunodawo kuita here? Unoda kutungamirira vana vako kuti vashumire Jehovha. Unoda kuti vana vako vave nemanzwiro akafanana neemunyori wepisarema uyo akanyora kuti: “Ndakafarira kuita zvamunoda, haiwa Mwari wangu, mutemo wenyu uri mukati mangu.” (Pis. 40:8) Kana vana vakabatsirwa kuti vave nemaonero akadaro vachatsaurira upenyu hwavo kuna Jehovha vobhabhatidzwa. Asi vanofanira kutora danho iri kana vakura zvokugona kuita chisarudzo ichocho uye kana vava nechido chakasimba chokushumira Jehovha.
14, 15. (a) Vabereki vechiKristu vanofanira kuva nechinangwa chei? (b) Chii chingaita kuti mwana wenyu ari kuyaruka asava nechokwadi nezvatinotenda?
14 Asi mungaita sei kana vana venyu vachiita sokuti havasi kufambira mberi pakunamata, zvimwe vachitoratidza kuti havana chokwadi nezvatinotenda? Shandai nesimba kuti muvabatsire kuti vade Jehovha Mwari uye kuti vaonge zvose zvaakavaitira. (Zvak. 4:11) Kana mukabudirira kuvabatsira, vachakwanisa kuzvisarudzira kunamata Mwari.
15 Asi panguva ino, mungaitei kana vakatanga kuratidza kuti havana chokwadi nezvatinotenda? Mungavabatsira sei kunyatsoona kuti kushumira Jehovha ndicho chinhu chakanakisisa uye kuti kunoita kuti vawane mufaro usingaperi? Edzai kuona kuti chii chiri kuita kuti vasava nechokwadi nezvatinotenda. Somuenzaniso, mwanakomana wenyu haatombobvumi zvinodzidziswa neBhaibheri here kana kuti ari kungotya kuparidzira vamwe vake? Mwanasikana wenyu haana chokwadi here nokuti mitemo yaMwari inobatsira kana kuti ari kungonzwa kusurukirwa uye vezera rake havasi kuda kushamwaridzana naye?
Vatungamirirei (Ona ndima 13-18)
16, 17. Vabereki vangabatsira sei vana vavo kuti vazvisarudzire kushumira Jehovha?
16 Pasinei nokuti chikonzero chingava chei, munogona kubatsira mwana wenyu kuti aone kuti zvatinotenda ndezvechokwadi. Mungazviita sei? Vabereki vakawanda vakaona kuti nzira inobudirira yokuti vazive zvinofungwa nevana vavo ndeyokuvabvunza kuti: “Unonzwa sei nokuva muKristu? Ndezvipi zvaunoona zvakanakira kuva muKristu? Kuva muKristu kunoita kuti munhu asangane nematambudziko api? Unofunga kuti matambudziko acho anokunda makomborero akawanda atiri kuwana iye zvino uye atichawana mune ramangwana here? Nei uchidaro?” Bvunzai mibvunzo iyoyo nemashoko enyu pachenyu muchiratidza kuti mune hanya navo kwete kuita sokuti muri kuvapa mhosva. Pamunenge muchitaura navo, munogona kukurukura mashoko ari pana Mako 10:29, 30. Vamwe vechiduku vangada kunyora pasi matambudziko anosangana nevaKristu uye makomborero avanowana. Kuona zvinhu izvi papepa kungavabatsira kuona pavanofanira kugadzirisa uye kuti vangapagadzirisa sei. Kana tichifanira kudzidza bhuku raBhaibheri Rinombodzidzisei? uye ra“Rudo rwaMwari” nevanhu vanofarira, hatifaniriwo here kuadzidza nevana vedu? Ndizvo zvamuri kuita here?
17 Nokufamba kwenguva, vana venyu vachafanira kuzvisarudzira kuti vanoda kushumira ani. Musafunga kuti vachangoerekana vava nekutenda kwakafanana nekwenyu. Vanofanira kuzvimiririra pakushumira Jehovha. (Zvir. 3:1, 2) Kana zvichiita sokuti mwana wenyu ari kunetseka kuti ave neukama naMwari, madii kudzidzazve naye dzidziso dzokutanga dzeBhaibheri? Mubatsirei kuti afunge nezvemibvunzo yakaita seiyi: “Ndinoziva sei kuti Mwari ariko? Chii chinoita kuti ndive nechokwadi chokuti Jehovha Mwari ane hanya neni? Nei ndichitenda kuti mitemo yaJehovha yakandinakira?” Ratidza kuti uri mufudzi akanaka nokuva nemwoyo murefu pakutungamirira mwana wako kuti ave nechokwadi chokuti kushumira Jehovha kwakatinakira. *—VaR. 12:2.
18. Vabereki vangatevedzera sei Mufudzi Mukuru, Jehovha?
18 VaKristu vose vechokwadi vanoda kutevedzera Mufudzi Mukuru, Jehovha. (VaEf. 5:1; 1 Pet. 2:25) Asi vabereki ndivo vanotofanira kunyatsoziva vana vavo, voshanda nesimba kuti vavatungamirire kuti vazowana makomborero anobva kuna Jehovha. Saka itai zvose zvamunogona kuti muchengete vana venyu sezvinoita mufudzi nokuramba muchivarera muchokwadi!
^ ndima 9 Kuti muwane mamwe mazano, onai Nharireyomurindi yaAugust 1, 2008, mapeji 10-12.
^ ndima 12 Kuti uwane mamwe mashoko ona nyaya inoti “Kunamata Kwemhuri—Kunokosha Kuti Tipukunyuke!” iri muNharireyomurindi yaOctober 15, 2009, mapeji 29-31.
^ ndima 17 Ona mamwe mashoko muNharireyomurindi yaFebruary 1, 2012, mapeji 18-21.
VAKABATSIRWA NOKUNAMATA KWEMHURI
Funga nezvemashoko akataurwa nevamwe vechiduku nezvekunamata kwemhuri.
“Manheru Okunamata Kwemhuri anobatsira kuti usimbise ukama nevomumhuri yako uye naJehovha. Unodzidza zvakawanda nezvokuti uri munhu akaita sei uye kuti kunamata kwako kwakaita sei. Unogonawo kuona paunofanira kugadzirisa.”
“Kunamata kwemhuri kunoita kuti titaure zvatinofunga takadekara zvedu. Inguva yokuti timbobvisa pfungwa pazvinhu zvinotinetsa muupenyu todziisa pakunamata. Pane imwe nguva taisava neurongwa uhwu asi iye zvino tava nahwo. Chikomborero chaicho!”